Uma uqhathanisa nopiyano wendabuko, upiyano lwedijithali alunankinga kangako, konke okudingeka ukwenze ukungena ngaphakathi; ukukusindisa ekuhleleni upiyano. Futhi imodeli ethile ephathekayo yepiyano ledijithali ingahanjiswa nganoma yisiphi isikhathi. Lokhu kufanelekile kubantu abasha abathanda upiyano, kepha badinga ukuhamba njalo, noma ...
Yize ukwesulwa kwamanye ama-oda aphesheya kwezilwandle
“Yize ukwesulwa kwamanye ama-oda aphesheya kwezilwandle kubangelwe wubhubhane, bengingalindele ukuthi ngithole ama-oda amaningi ngokuthembela ekusakazweni bukhoma namhlanje. Kube yingozi enhle ngempela! ” Ntambama ngoMeyi 30, uZhu Li, usihlalo wePlume Piano Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd., ...
Konke mayelana nepiyano ledijithali
Izinzuzo zepiyano kagesi: 1, Uma kuqhathaniswa nepiyano ejwayelekile ye-acoustic, upiyano lwedijithali lushibhile impela. 2, upiyano lwedijithali aluhlali ndawo eningi. 3, Kulula kakhulu ukuhambahamba. 4, Umsindo uhlale umuhle. 5, Izindleko zokugcina eziphansi. 6, Ungasebenzisa ama-headphone, ungakhathazi umakhelwane wakho ...
Ugesi uPiano Omkhulu, I-piano yedijithali ephansi, UPiano Oqondile Kagesi, Ukulungiswa Kwepiyano Ledijithali, Ikhibhodi ye-Smart Piano, Ipiyano Eqondile Yedijithali,